Abenzi nabahlinzeki abaningi bokukhetha - Ifektri yaseChina Engaphezulu Yokukhetha
Imikhiqizo yethu yaziwa kabanzi futhi ithembekile ngabasebenzisi futhi ingahlangabezana nezidingo eziqhubekayo zokuthuthuka kwezomnotho nezenhlalo ze-More Choice,,,,, Quality is lifestyle's factory, Focus on demand 'customers can be the source of corporation survival and advancement, Wehesive to honesty and isimo sengqondo esikhulu sokusebenza kokholo, sibheke phambili ekufikeni kwakho! Manje sineqembu lethu lokuthengisa eliphelele, isitayela kanye nabasebenzi bokuqamba, abasebenzi bezobuchwepheshe, abasebenzi beQC kanye neqembu lamaphakheji. Manje sesinenqubo eqinile yokuphatha izinqubo zohlelo ngalunye. Futhi, bonke abasebenzi bethu banolwazi embonini yokuphrinta ye-More Choice, unjiniyela we-R & D oqeqeshiwe uzoba lapho ngensizakalo yakho yokubonisana futhi sizozama konke okusemandleni ethu ukuhlangabezana nezidingo zakho. Ngakho-ke sicela ukhululeke ukuxhumana nathi ukuthola imibuzo. Uzokwazi ukusithumela ama-imeyili noma usishayele ibhizinisi elincane. Futhi uyakwazi ukuza ebhizinisini lethu wedwa ukuze wazi ngokwengeziwe ngathi. Futhi ngokuqinisekile sizokunikeza ikhotheshini enhle kakhulu nesevisi yangemva kokuthengisa. Silungele ukwakha ubudlelwane obuzinzile nobungcono nabathengisi bethu. Ukufeza impumelelo yomunye nomunye, sizokwenza konke okusemandleni ethu ukwakha ukubambisana okuqinile nokusebenza okusobala nabangane bethu. Ngaphezu kwakho konke, silapha ukwamukela imibuzo yakho nganoma yiziphi izimpahla nomsebenzi wethu.
I-PD258V ishaja elinamandla elinamandla elishajekayo futhi alikho nokhonkolo onebhokisi elinoqwembe oluqinile. I-PD258V Anti Bark Dog Collar iyithuluzi lokulawula ukukhonkotha okuzenzakalelayo elihlakaniphile, elisebenzisa kuphela isixwayiso sokudlidlizela ukulawula ukusebenza kwenja. Kufanelekile ukugqoka izinja ezinkulu, eziphakathi nezincane.
Ukuzwela kungashintshwa, futhi umsebenzisi angakhetha ukuzwela okufanele ngokuya ngamandla wezwi lokukhonkotha kwenja. Kukhona amagiya ama-5 okulungisa, igiya elizenzakalelayo ngamagiya ama-3 aphakathi. Uma ucindezela izinkinobho zokulungisa “+” no “-”, kuzokhala ibhiphu. Ukuphakama kokuzwela, kuba lula ukuqala umsebenzi.
PD258S Alikho Bark Inja Ikhola
I-PD258S ikhola elwa namagxolo elisebenza ngamandla aphansi, elinezikhumbuzi zomsindo nesixwayiso esimile, elifanele ukulinganisa ukusebenza kwezinja ezincane neziphakathi nendawo. Isisindo senetha lomkhiqizo ngama-33g, angenzi ukuthi inja izizwe isindwa uma iwugqokile. I-PD258S Ayikho i-Bark Dog Collar ekhokhiswa amahora ama-2, ingasetshenziswa kuze kube yizinsuku ezingama-60 futhi isikhathi sokulinda singaphezu kwezinsuku eziyi-180, siqinile kakhulu. I-PD258S inamazinga amahlanu wokulungiswa kokuzwela. Ungenza ngezifiso ukuzwela okukhethekile kwenja ngokucindezela izinkinobho ezingakwesokunxele nangakwesokudla ngokuya ngezimo ezahlukahlukene zokukhonkotha kwenja. Ngaphezu kwalokho, ingahlola nesimo sebhethri esisele, esivumelana nabantu ukushaja idivayisi ngesikhathi. I-PD258S ingafinyelela ezingeni le-IP65 lokumelana kwamanzi, ukuze isetshenziswe ngokujwayelekile ngisho nasezinsukwini zemvula noma emanzini.
I-PD218 No Bark Dog Collar ifakwe isikrini sokubonisa sedijithali se-LCD, esiqaphela ukubona ukusebenza, okwenza kube lula futhi kube lula ukusisebenzisa. Inemisebenzi emithathu: isikhumbuzi somsindo, isikhumbuzi sokudlidliza kanye nesixwayiso sokushaqeka kagesi. Ngakho-ke ukusebenza kwe-PD218 No Bark Dog Collar kungasetshenziswa ekuhlanganisweni okuningi, okulungele izinja ezinobuntu obuhlukile nezinhlobo zomzimba. Ibhethri elishajekayo elakhelwe ngaphakathi lingasetshenziswa kaninginingi ngethebula lokushaja le-USB, futhi lingashajwa amahora amabili futhi lingafinyelela isikhathi eside sokulinda esifinyelela ezinsukwini ezingama-60.
I-Outdoor Waterproof Dog House 424 yenziwe ngezinto ezikhethiwe ezisezingeni eliphakeme ze-PP, eziqinile futhi eziqinile, ezingenamphunga futhi ezingenanambitheka. Lapho isetshenziswa ngaphandle, ayikwazi ukugcina umthunzi kuphela nokuvimba umoya, kepha futhi iyana futhi iphefumule, inikeze indawo yangasese ephephile nenethezekile yenja. Uma ucabangela ukusetshenziswa kwezinhlobo ezahlukene zomzimba wezinja, inosayizi ababili: 424-S no-424-L. I-424-S iyindlu ekhethekile yezinja yezinja ezincane (njengeShiba Inu, iCorgi, njll.), Kuyilapho i-424-L yenzelwe izinja ezinkulu (njenge-Alaska, i-German Shepherd, njll.).
I-Outdoor Waterproof Dog House 403 iza ngosayizi abathathu futhi ingasetshenziselwa amakati nezinja ezinobukhulu obuhlukahlukene. Uma ucabangela imikhuba yezinja ezincane namakati, kunemininingwane emibili yamamodeli amancane - isitayela somnyango nesitayela esingenamnyango. I-Outdoor Waterproof Dog House 403 isebenzisa ukwakheka kwesibhakabhaka ukukhulisa ukusakazwa komoya, okulungele ukuqeda nokususa iphunga, nokugcina umoya endlini yenja uhlanzekile. Umklamo obushelelezi we-eaves design ungavimbela ngempumelelo amanzi emvula ukuthi angene endlini futhi enze lula ukuhlanzwa kwendlu yenja. Isicabha sinokhiye wokuphepha, ongavulwa kuzo zombili izinkomba futhi kulula ukusisebenzisa. Izikhala zokungenisa umoya zenzelwe ezindaweni eziningi endlini ukuqinisa umoya nokukhipha ngaphakathi endlini ukususa iphunga nokuvikela iphunga. Isisekelo singasuswa kalula ukuze kuhlanzwe kalula. Futhi indlu yonke ihlanganisiwe ukunciphisa ivolumu yokupakisha nokunciphisa impahla.